सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाद्वारा ‘प्रणय’ र ‘अतिरिक्त’को विमोचन Kasthamandap Daily
काठमाडौँ, असार ९ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गीत गजल एल्बम ‘प्रणय’का साथै ‘अतिरिक्त’ उपन्यासको एक कार्यक्रमकाबीच विमोचन गनुभएको छ ।
राजधानीमा शुक्रबार आयोजित विमोचन कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कला संस्कृतिको जगेर्ना गरेमात्र राष्ट्र बन्ने कुरा उल्लेख गदैँ संगीतको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘संगीतकार र गीतकारहरुमा समाज रुपान्तरण गर्ने आक्र्रमणकारी तत्व हुन्छ, यो तत्वले सबैलाई एक ठाँउमा उभ्याउन सक्छ । गीतमा हिमाल, तराई र पहाड सबै नाच्छन् त्यसैले गीत संगीत भनेको अनेकतामा एकता ल्याउने तागत हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कला संगीत र साहित्य क्षेत्रले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनभुयो । उहाँले गीत संगीत भनेको मुलुक र जनतालाई सन्देश दिने खालको पनि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गीत गजल एल्बम ‘प्रणय’मा गायक तथा संगीतकार सागर अधिकारी ‘शरद’को एकल संगीत तथा डा. डीआर उपाध्यायको एकल रचना रहेको छ । गीतकार, उपन्यासकार तथा लेखक डा. डीआर उपाध्यायको ‘अतिरिक्त’ नामक उपन्यास साताँै उपन्यास हो ।
कार्यक्रममा गायक अधिकारीले गीत गजल एल्बम ‘प्रणय’ आफूले निकै मेहनत गरेर ल्याएको बताउदैँ आफूले संगीत पारखीका लागि नयाँ खुराक पस्किएको बताउनुभयो । हालसम्म आधुनिक गीत गजल, भजन तथा राष्ट्रिय भावका ३० भन्दा बढि गीतमा स्वर दिएका अधिकारीले ७० भन्दा बढिमा संगीत दिइसक्नु भएको छ ।
पछिल्लो समय आफ्ना गीत संगीतबाट दर्शक र श्रोताहरुको मन जित्न सफल गायक अधिकारीले निरन्तर लागि रहने हो र धैर्य गर्ने हो भने संगीत क्षेत्रमा लगेर बाच्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
दाङ गोग्लीका अधिकारी विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौंमा संगीत क्षेत्रमा साधनारत हुनुहुन्छ । उहाँले २०५८ सालदेखि संगीतको औपचारिक शिक्षा शुरु गर्नुभएको हो । अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शास्त्रीय संगीतअन्तर्गत गायन विधामा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गर्नुभएको हो । उहाँले हालसम्म विभिन्न गायकको स्वर रहेको १० वटा एल्बममा स्वर समेत दिनुभएको छ ।
गीत गजल एल्बम ‘प्रणय’मा जम्मा ६ वटा गीत छन्, सबै गीतमा अधिकारीकोसंगीत रहेको छ । आऊ न आऊ आफ्नौ छाँयाले, चौबन्दी चोलीमा लगायतका गीतमा नेपाली गीत संगीतका दिग्गज गायक गायिका सत्यराज आर्चाय, स्वरुपराज आर्चाय, प्रमोद खरेल, मेलिना राई, सुरेश लामा, मिलन अमात्य, चन्द्र काफ्ले र सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर रहेको छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ संगीतकार तथा गायक प्रेमध्वज प्रधान, दिनेश अधिकारी, गुलु मुकारुङ्, चण्डी काफ्ले, डा. भिर्माजुन आचार्य लगायतका व्यक्तिहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।